इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जंगिएपछि कड्किए महान्यायाधिवक्ता — Imandarmedia.com
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जंगिएपछि कड्किए महान्यायाधिवक्ता
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका वकिलले पूरक रिट निवेदक ल्याएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले फिर्ता नलिए कारबाहीको भागिदार हुने चेतावनी दिएपछि महान्यायाधीवक्ता बडाल बहसमा उत्रिँदै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका हुन् ।
‘५ जना न्यायाधीश अस्ति जो इजलासमा बस्नुभयो उहाँहरुको आदेश मान्ने की नमान्ने भन्ने प्रश्न छ’, उनले भने, ‘यो अस्ति लेखेको राय के हो ?’ जेठ १८ गतेको इजलासको राय देखाउँदै उनले अगाडि भने, ‘यो आदेशमा प्रधान न्यायाधीशको हस्ताक्षर खै ? हाम्रो न्यायिक प्रणालीलाई हामीले कुन दर्जामा राख्ने ? निवेदकले प्रश्न उठाए ठिक अनि अरुले प्रश्न उठाउँदा चाहिँ कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने ?’
उनले अदालतले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक परम्परा केहो भन्दै आक्रोश पोखे । उनले १८ गतेको आदेशमा केही न्यायिक विचलन रहेको पनि जिकिर गरे ।
सो क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अब आफूहरुको अर्को विकल्प बाँकी नरहेको बताए । ‘हामीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको हो, उहाँको कार्यालयकै विरुद्ध मुद्दा छ । त्यसैले यहाँ संसदीय सुनुवाइ गर्ने सांसदहरुले मुद्दा हालेको हुनाले सुनुवाई गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आयो,’, उनले भने ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका क्रममा सरकार पक्षीय वकिलहरूले इजलासमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराई बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर र बमकुमार श्रेष्ठले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर कहाँ लेखिएको छ भन्दै प्रश्न गरे ।
‘मैले यो मुद्दा हेर्छु हेर्दिन भन्न मिल्छ तर, अरु दुईजना न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले हेर्न मिल्दैन भनेर भन्न मिल्छ ? यो कहाँ लेख्या छ’, उनले जेठ १८ गते इजलासमा आफ्नो राय दिने कार्की र भट्टराईप्रति कटाक्ष गर्दै भने ।
‘दुईजना न्यायाधीशले १८ गते यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने र नेकपासँग सम्बन्धित उपउत्पादन भनेर उहाँहरुले नै भन्नुभएको छ । न्यायाधीशले कारण सहित फैसला गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संसद विघटन नेकपा विवादको उप उत्पादन भनेर फैसला गरेपछि फेरि हेर्न कसरी मिल्छ रु’ उनले न्यायालय सबैको भएकाले सबैको चित्त बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पन्तले न्यायाधीशले अर्काको कुरा सुन्ने नभइ अन्तरआत्माको कुरा सुन्नुपर्ने पनि बताए । ‘तिनीहरुले हेर्ने भए म बस्दिनँ भनेर आदेश लेखेपछि के आधारमा बस्न मिल्छ यो इजलासमा रु’, उनले भने, ‘ न्यायाधीशले आफ्नो आत्माको कुरा सुन्ने हो अर्काको आत्मको कुरा सुन्ने हैन ।’ उनले प्रश्न नउठेको बेला दुईजना श्रीमानहरूले किन बोल्नुभयो भन्दै प्रश्न पनि गरे ।
यसअघि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि संवैधानिक इजलासमा समेटिएका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई बाहिरिनुपर्ने बताएका थिए । उनले आफूहरुलाई यो इजलासमा आशंका भएकाले कार्की र भट्टराई बाहिरिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
‘मेरो विनम्र आग्रह छ, दुईजना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई यो मुद्दाबाट अलग भइदिनुस्’, उनले भने, ‘पूर्वाग्रहको आशंका भए पुग्छ भन्ने आनन्दमोहन श्रीमानले नै लेख्नुभएको छ । हामीलाई यो इजलासमा आशंका छ ।’